Iyo inotevera iPhone ine LCD skrini ichave yakakwira resolution kupfuura zvakajairwa | IPhone nhau
Ruben gallardo | | IPhone Zviteshi
Mumwedzi mishoma zvine chokwadi chekuti tichava nemaPhones matsva. Mumwe wavo acharamba achibheja pane LCD pani, kunyangwe dhizaini yacho ichave iyo yakatangwa neiyo iPhone X. Zvino, zvinoita sekunge iyo resolution ichave yakakwira kupfuura iyo yaishandiswa nemimwe michina yeLCD yekare uye mafuremu anenge ari madiki pane egore rino akakurumbira modhi.
Zvinonyanya kuzivikanwa kuti mumwedzi mishoma tichava nemaPhones matsva ekushandisa mari pairi; Apple, senguva dzose, ichakwanisa kumhanyisa michina yayo yekushambadzira pakazara uye ichakwanisa kudzidzisa manzwiro ekuda kune vashandisi. Kusiya nyaya iyi padivi, sekuzivikanwa kwayakaita kuburikidza ne asian post, inotevera 6,1-inch LCD iPhone, runyerekupe runayo, Ini ndaigona kubheja pamatanho epamusoro-ekushanda eLCD kubva kukambani yeJapan Display, iyo inodaidza mapaneru ayo kuti "Full Active".
Kazhinji, zvisarudzo zvinoshandiswa nedzimwe iPhones zvine LCD skrini ndeye 1.920 x 1.080 pixels - iyo iPhone 7 Plus, semuenzaniso. Ndichiri nemapaneru aya, ayo atove kushandiswa mumakwikwi emhando dzakadai seXiaomi Mi Sanganisa 2, yaizokwira kusvika ku2.160 x 1.080 pixels. Kana ichi chiri chokwadi, kuwanda kwaizowanikwa kungave 400 dpi. Zvakare, iyo ratio chiyero ingavewo yakasiyana neiya inoshandiswa pane iyo iPhone X uye iyi 6,1 inch modhi yaizoshandisa 18: 9 ratio.
Kune rimwe divi, zvinoenderana neruzivo rwakaratidzwa, Iyi modhi yaizove nematete matete pane ayo isu atinogona kuwana pane iyo iPhone X. Sezviri pachena Japan Ratidza's Yakazara Anoshanda mapaneru anoda asingasviki mamilimita 0,5 pamativi ese mana kuti aise.
Ehezve, pamusoro peiyi 6,1-inch LCD iPhone isu taizowana yakakurumbira "Notch" ine yayo TrueDepth kamera kushandisa Face ID. Zvichakadaro, imwe yerunyerekupe yakaiswa mutengo weiyi modhi anenge 700-800 madhora. Tichaona chiri chokwadi mune zvese izvi mumwedzi iri kuuya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » Iyo inotevera iPhone ine LCD skrini ichave nesarudzo yepamusoro kupfuura zvakajairwa
Tichaona pakupedzisira zvavachaita, kana vakasaramba vachienderera mberi ne iPhone X uye nezvesikirini zvavachaisa, ndiri kushamisika kuti ivo vave kutoseka nezvazvo, kunyangwe pa iPhone X vanga vakarurama chaizvo.